Abathandi bakaMaskandi bakhala ngokuvalelwa ngaphandle kwabaculi koweMpucuzeko | News24
Abathandi bakaMaskandi bakhala ngokuvalelwa ngaphandle kwabaculi koweMpucuzeko
Durban - Kulo nyaka i-World Cup kaMaskandi izobanjelwa enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida, eThekwini.
Lo mcimbi kaMaskandi ungowokuqala ukulandela lowo wangomhlaka-29 Ephreli obuseCurries Fountain nowaphela kabi sekudutshulwa abalandeli.
IMpucuzeko yiwona mcimbi othandwa kakhulu kanti futhi kulo nyaka abathandi bomculo wesintu bazohlomula nangezokuthutha zamahhala.
Ngokusho kwabahleli balo mcimbi, kulo nyaka basebenza ngokubambisana noMasipala weTheku ukuthuthukisa uthando lomculo wesintu nokuvundulula amakhono amasha.
Umhleli walo mcimbi uXolani Mcineka uthe umkhankaso wabo bebambisene nomasipala bawuqala emahhostela.
OLUNYE UDABA:UPhuzekhemisi uxolisile “ngenhlamba” okuthiwa wayithuka
“Kulo nyaka kunomkhankaso esiwuqalile noMaspala weTheku sivakashela amahostela ngenhloso yokuhlunga amaciko asekulungele ukudlala emcimbini osezingeni le-World Cup. Ebesikubheka ikhono nomlayezo ezingomeni kanye nokuzimisela kwakhe umculi,” kusho uMcineka.
UMcineka uthe uyakuqondisisa ukukhala kwabathandi bomculo ngabaculi abathile abangaqashelwanga kulo mcimbi kodwa ezinye izimo zibe ngaphezu kwamandla abo.
“Baningi abaculi esithanda ukubafaka kodwa silawulwa yisikhathi, kulokhu sizosheshe siqede. Maningi kakhulu namanye amaciko esingakafinyeleli kuwo, asezingeni elihle nawo,” kuqhubeka yena.
Abalandeli balo mculo bakhala kakhulu ngokungamenywa kukaBobo uMfana wePiki kanye noBheki Mshengu kanti futhi akucacile kahle ukuthi ngobani abaseMkhomazi abazobe bekhona njengoba kusavela igama likaBahubhe kuphela.
UMcineka uthe isinqumo sokuqashwa kwabaculi sihambisana nesabelo sezimali abanaso kulo nyaka, kodwa bazame ngakho konke ukuvulela nabanye abaculi abangazange balithole ithuba ngonyaka odlule njengoJaiva kanye noZanefa.